Mahara Amazon Chipo Makadhi (Mbudzi. 2020) - Kushanda Makodhi - Kutamba
Ungawana Sei Mahara Amazon Chipo Kadhi?
Maitiro ekuwana emahara amazon echipo makadhi? Iyi ndeimwe yemibvunzo inowanzo bhururuka mundangariro dzevadi vekutenga amazon. Saka pano isu tine mhinduro. Kushopu yatove chiitiko chinonyaradza vanhu vazhinji pasirese. Inogona kuitirwa kurerutsira, kuvaraidza, uye kunakidza kana iwe ukawana emahara makuponi kana echipo makadhi ekutengera izvo zvaunoda zvinhu.
Makadhi echipo eAmazon anogona kushandiswa kutenga zvinhu zvakasiyana-siyana zvawakarota nezvazvo, zvinosanganisira zvemukati zvemukati, mimhanzi yedhijitari, uye mitambo yemavhidhiyo. Makadhi echipo eAmazon anogona kukubatsira kutenga chero chinhu chauri kuronga kutenga. Iyo inogonesa iwe kuti utize kubva kune yakawanda hustles. Unogona kutenga zvinhu usina kubhadhara muhoro wako wenguva dzose.
Maitiro ekuwana emahara Amazon zvipo makadhi? Uyu mubvunzo unofanirwa kunge uchinyengera pfungwa dzako, asi isu hatizorega iwe uchimirira zvimwe. Ichi chinyorwa chakanyanya kunyorwa kuti chikubatsire iwe kuti usvike emahara amazon echipo makadhi kuburikidza nenzira dzakareruka uye dzakavimbika.
Tora Mahara PSN Makodhi
Roblox Promo Makodhi
23 Yakanakisa Nzira dzekutora Mahara Amazon Chipo Kadhi:
Inotevera ndiyo makumi maviri nenhatu nzira dzakanakisa dzekuwana maamazon echipo emakadhi
1. Hupenyu Points
Hupenyu Pfungwa imwe yemasayiti anonyanya kufadza ekuwana mibairo iyo inosanganisira amazon zvipo makadhi uye ine anopfuura mamirioni mazana mashanu enhengo pasirese. Mushandisi anofanira kuita ongororo dzinonakidza nezve mafirimu kana zviitiko zvazvino.
Kunze kwekuwana makadhi echipo, iwe unonakidzwa nekukoka kwayo zvakare kuti uwedzere kuyedza kwechigadzirwa.
Toluna ndeimwe yeanonyanya kufarirwa chikamu chenguva-yekuongorora uye chikamu-chenguva social media saiti. Inoita bvunzo dzechigadzirwa zvakanyanya uye inobatsira vashandisi vayo kudyidzana nedzimwe nhengo kuvaka hukama hunonakidza, hunonakidza nekutamba mitambo nevamwe.
Iwe unogona nyore mubayiro iwo mapoinzi awakawana kuburikidza neAmazon zvipo makadhi
Kubudikidza neino inonakidza saiti, mushandisi anogona kuwana mumasekondi gumi. Iyo inobhadhara kutarisa akasiyana ma ads, akasiyana zvigadzirwa bvunzo, uye ongororo. Mubayiro wakachipa panePrizeRebel kadhi rechipo remadhora maviri.
Yougo ndeimwe yenzira dzakakurumbira dzekuwana mibairo. Saiti ino inobhadhara makumi maviri emadhora semubairo wekugamuchira. Izvo zvinokubatsira iwe kuwana nekukubvunza iwe maonero ako nezve mafirimu, zvazvino zviitiko uye zvimwe zvimwe zvinogoneka zvinhu zvavanofarira.
Kazhinji, ongororo inobhadhara iwe bhonasi yemapoinzi mazana maviri nemakumi mashanu, uye iwe unogona kuwana mibairo yako kana yasvika pachiyero chemapoinzi mazana mashanu. Mapoinzi mazana mashanu akaenzana nemadhora makumi mashanu, inova mari ine hushamwari yekubatsira iwe kutenga zvimwe zvinhu paAmazon.
Unogona kudzikunura yako mibairo kuburikidza neAmazon zvipo makadhi, ndicho chikonzero chakakosha iwe chauri kutarisa muno.
Harris yekuongorora saiti ndeimwe yemakambani ekutanga ekutsvaga. Ivo vanoita dzakasiyana ongororo nezvevatengi maitiro uye zvirikuitika zviitiko. Ivo havangokubhadhare iwe chete nemubairo uyo unogona kuregererwa kuburikidza nemari kana amazon zvipo makadhi asiwo iwe unowana mukana wekupinda yavo yemubairo madhirowa. Unogona kuve nemukana wekuhwina mubairo wemari.
Imwe mamiriro ekuve chikamu cheHarris poll ongororo ndeyekuti mushandisi anofanira kunge aine makore gumi nemasere ekuberekwa kana pamusoro. Saka, kana uri wechidiki, asingasviki makore gumi nemasere ekuberekwa, saka unofanira kutarisa dzimwe nzira dzatakakupa kuti uwane mahara amazon zvipo makadhi.
Amazon chipo kadhi anoda! Swagbucks ine nzira dzinonakidza uye dzinovaraidza dzekukubatsira iwe kuti uwane mahara amazon zvipo makadhi emabasa anonakidza uye akananga. Ino saiti inobhadhara vashandisi vayo kuona mitambo yemavhidhiyo, kutsvaga pawebhu, uye kuita online shopu.
Kubhadhara kwayo kunobata sezvo ivo vachikubhadhara iwe nemubairo wemadhora mashanu chete ekusaina. Unogona kuwana emahara amazon echipo emakadhi nekuvhura kuburikidza neswag bucks zuva nezuva. Tinokurudzira kuti usarasikirwe nemukana.
Iyo ndiyo inonakidza nzira yekutora emahara amazon makadhi uye kuwana mari mibairo zvakare. Pakutanga yakatanga kuchitoro, asi ikozvino yakawedzera kubhadhara vashandisi vayo pakutenga chero chinhu chiripo. Iyo haibhadhare kwete chete yekutenga pamhepo asiwo yekutenga muzvitoro. Inokupa iwe mari yekumashure futi.
Iyo ine nzira dzakawanda dzekuita vashandisi vayo kuti vawane kazhinji kazhinji kuburikidza nayo sezvo ichikubhadhara iwe madhora mashanu ekukoka shamwari dzako, zvinova zvinofadza kwazvo. Ibotta yakafanana nechinopa simba kune vanotenga zvinokambaira. Inoita vanoshandisa vakaneta kutsva nekutumira vane rudo kuburikidza nemapoinzi. Iwo mapoinzi anogona kuregererwa kuburikidza neAmazon zvipo makadhi, chimwe chinhu chawanga uchitsvaga.
8. Donhedza App
Iyo inonakidza mari yekudzosera app. Iwe unosaina kuDrop App uye wobva wawedzera ako mashanu anodiwa vatengesi. Iwe unofanirwa kubatanidza yako kiredhiti kana kiredhiti kadhi, zvakare, kuti ubhadhare kune ako epamhepo kutenga. Pane yega yega yekutenga pamhepo kuburikidza neApp iyi, iwe unowana mapoinzi kana madonhwe anogona kuregererwa kuburikidza neAmazon zvipo makadhi
Iyo inobhadhara madhora mashanu ekungosaina chete uye kubatanidza kiredhiti kana kiredhiti kadhi sebhonasi inogamuchirwa. Isu tinovimba kuti isu tave kutarisa kungwara kwauri apo isu tichipindura zvakakwana kumubvunzo wako unoshungurudza: maitiro ekuwana mahara amazon zvipo makadhi? Boom!
Iwe unoda mahara amazon echipo emakadhi asi ane husimbe hwekuita chigadzirwa kuyedza uye kuongorora? Wobva warega kunetsa sezvo InstaGC yakavhura kuti ikubvise mukushushikana kwako uye iine nzira dzakanaka dzekuwana mahara amazon zvipo makadhi.
InstaGc inobatsira vashandisi vayo nekuona mavhidhiyo, kutamba mitambo yemavhidhiyo, kana kungo tarisa pawebhu kuti uwane mibairo. Iyo mibairo inogona kuregererwa kuburikidza nekutengesa iwo muAmazon makadhi emakadhi.
10. Hunhu Hwevanhu
Hwekumba hupfumi chirongwa chezvemari chinokubatsira kubata mari yako. Iyo inobvumidza vashandisi vayo kuteedzera mari yavo, kuyerera kwemari, mabhajeti, uye pamudyandigere.
Asi nei uri kutarisa mazviri?
Chinhu chipi zvacho kwauri? Hongu, haungatende kuti zvinhu zvinogona kuve nyore. Yemunhu mari anokubhadhara iwe nemakumi maviri emadhora amazon echipo kadhi chete yekusainira kuPersonal Capital.
Saka, buda munzvimbo uye unomhanyira kunotora yako makumi maviri emadhora amazon chipo kadhi.
Inboxdollars akabhadhara anosvika makumi mashanu nematanhatu emadhora kunhengo dzayo kubvira 2000. Ivo vanotora ongororo maererano nevatengi kubva pamaminetsi matatu uye inogona kureba semaminetsi makumi maviri neshanu. Kazhinji, vanobhadhara pakati pe0.5 kusvika kumadhora mashanu asi vanogona kuenda pamusoro pemadhora makumi maviri kana vakawana tarisiro yavanogona kunge vachitsvaga.
Ivo zvakare vane sarudzo dzekuwana sekutarisa mavhidhiyo emamuvhi terevhizheni kana kuverenga eemaimeti ekusimudzira kana kungodzikinura ma coupon emahara. Ivo vanokubatsira iwe kudzikunura yako mibairo kuburikidza neAmazon zvipo makadhi.
12. Nzvimbo Yemafungiro
Iyo zvakare yakasarudzika saiti yekuwana mahara maAmazon zvipo makadhi. Izvo zvinongokumbira ivo vashandisi kuti vaite iwo maratidziro anodikanwa. Kazhinji, kuongororwa kunosvika gumi kana gumi nemashanu maminetsi.
Iyo inobhadhara yako mibairo iyo inogona kuregererwa zvakananga kuburikidza nemari kana amazon zvipo makadhi.
Ongororo tsoko ine hanya zvikuru nenguva nesimba revashandisi vayo. Sezvo nzvimbo zhinji dzekuongorora dzichitora maminetsi makumi maviri kana kutowanda kuti upedze ongororo, tsoko yeongororo yauya kuzokuitira kuti utore mapoinzi eongororo dzinotora maminetsi mashanu kana kunyangwe mashoma
Mushure mekusaina-kusaina kwako, ongororo yayo yekutanga ndeyekuziva kufarira kwako kuitira kuti usazombo shungurudza mune ramangwana uchipindura chero chidzidzo. Inokukumbira iwe kuti uongorore zvinoenderana neprofile yako.
Inoita kuti zvese zvinakidze uye mubairo kuwana. Unogona kubhadharisa mibairo yako kuburikidza neamazon echipo makadhi kana kuita charity kana matipi ako akwira kusvika pakukosha kwemadhora mashanu.
Ipoll inouya nesirogani yekuti ivo vanoda nzira iyo vanoshandisa vanofunga-vachiremekedza zvachose nekuyemura? Boom! Ipoll inzvimbo yekuongorora uye kunyorera kunoongorora pane zvigadzirwa nemasevhisi aunoshandisa zuva nezuva.
Mumwe anogona kuda kugovana maonero ake pane chimwe chinhu chinova chikamu chehupenyu hwezuva nezuva. Uye iyo yekuwedzera kufarisisa ndeye dhizaini yemubairo wemari inosvika zviuru zvishanu zvemadhora makota matatu. Iyo inobhadhara vashandisi vayo kuburikidza nemubairo, iyo inogona kuregererwa nekutengesa iyo yakawanikwa mapoinzi kuAmazon zvipo makadhi.
15. Kutamba mhute
Iwe uri mutambo wakapindwa muropa here? Iwe unoda kupihwa mari nekutamba chete mitambo yemavhidhiyo? Saka heino mukana wekutevera uchiwana nekungotamba mitambo kuburikidza nemistplay. Mistplay inzvimbo yekuwana mubairo kwaunotamba mitambo yemavhidhiyo uye kupedzisa kutenga kuri mumitambo.
Iwo poindi anotumidzwa sematombo kana zviumbu, asi anogona kutengeswa mumazoni echipo makadhi. Isu tinokurudzira vatambi kuti vasarasikirwa nemukana uno wekuwana mahara amazon zvipo makadhi.
16. Lucktastic Ongororo
Icho chiitiko chinonakidza icho chiri chevashandisi veApple uye IOS. Inobatsira vashandisi kukwenya matikiti erotari angangoita. Inokupa iwe matokeni ekuti utambe mimwe mitambo kana makadhi echipo uye mibairo yemari. Makadhi echipo anosanganisira eAmazon makadhi echipo, uye iyo mibairo yemari inogona kubva pamadhora maviri kusvika pamazana gumi nemashanu emadhora.
Kuti uve pro mushandisi uye chiratidzo chinokunda paLucktastic Ongororo, unogona kuzvibatsira nekurevera shamwari dzako kune ino saiti nekungotaura kuburikidza neako kutumira chinongedzo. Pakuendesa kwese, iwe unowana chiuru chematani.
App nana ipuratifomu inonakidza yekukubatsira iwe kuhwina mibairo nekuita yakatwasuka mabasa. Iwo mabasa anosanganisira kupinda mukati meino saiti mazuva ese, kuichengeta yakavhurika kwenguva yakati, kurodha pasi mimwe mitambo kana maapp, uye kuachengeta achiwanika kune imwe nguva kana kupedzisa mamwe matanho. Inobhadhara kuona kushambadza futi.
Iwo mapoinzi aunowana anozivikanwa seananas, uye anogona kushandurwa kuita mari kana amazon zvipo makadhi. Unogona kusarudza chero nzira dzekunakidzwa nekubhadhara kwako nekuita nyore mabasa. Ingori chero imwe pfupi nzira yekuwana emahara amazon zvipo makadhi.
Rakuten iri nyore uye ine mubayiro wakanyanya kudzosera mari portal. Iyo inobhadhara inodzosera kumusoro kusvika makumi mana muzana cashback nekutenga pamhepo kuburikidza neayo portal.
Iyo nzira inongova mashoma mashoma matanho.
Enda kune iyo Rakuten portal kutanga.
Sarudza mutengesi waunoda kutenga.
Sarudza maponi kana paine chero aunoda kuisa.
Kana iwe ukabudirira kutenga, iwe unowana iyo yakatumirwa mari yekudzosera muchipo kune yako Rakuten account.
Unogona kudzikinura mari nekutenga maAmazon echipo.
Kune nzira sere dzekuwana kuburikidza nechitoro kurova, iyo inopihwa kune vashandisi vayo. Inobatsira vashandisi kuwana kicks, ayo ari mapoinzi kuburikidza nekushanyira zvitoro zvepamhepo, kutarisa zvigadzirwa zvakasiyana online, uye, zvakanyanya kukosha, kutenga.
Izvo zvinobatsirawo kubhadhara iwe kuburikidza nekungoona mavhidhiyo. Iwe haufanire kuisa chero kutarisisa pane izvo. Ingonakidzwa nekumwe kutapira paunenge uchivhura mavhidhiyo uye uchisiya foni yako patafura.
Isu tinovimba kuti yaive pfungwa inonyengera kukuchengetai mese munzvimbo dzenyu dzekunyaradza uye kuita kuti zvive nyore kwauri kuti uwane mahara amazon zvipo makadhi.
Uchi ndiyo inonyanya kuchengetedza mari-yakawedzera bhurawuza iyo inobatsira vashandisi vayo kuchengetedza mari nekungoishandisa ivo vachingotenga pamhepo. Iyo ine inoshamisa inodonhedza rondedzero ficha, iyo inobvumidza vatengi kuteedzera madonhwe mumitengo yezvavanofarira.
Kunze kwekuchengetedza mari yako kuburikidza nekushandisa otomatiki emakoponi, zvakare zvinoita kuti iwe uwane mibairo. Iyo huchi mibairo yegoridhe inogona kuregererwa nekuvatengesa mumakadhi echipo eAmazon. Uchi ndiyo mhinduro ine hushamwari kumubvunzo wekuti ungawana sei mahara amazon zvipo makadhi.
Icho chisinganzwisisike kuwana purogiramu. inoitisa zvakavanzika mamishini. Kutanga wabva uine mepu iyo yaunosarudzwa kune zvimwe zvitoro zviri padyo newe. Iwe unofanirwa kuvashanyira uye uwane ongororo yeMobee. Mobee, kuburikidza nehungwaru hwayo, inogamuchira kana kuramba mhinduro yako, pamwe mumaawa makumi mana nemasere.
Kuti uwane mamwe mapoinzi, iwe unofanirwa kuenda kune yakawanda seinobvira mamishini. Iwe unogona kudzikunura ako mapoinzi nekutengesa iwo muAmazon makadhi emakadhi pavanosvika anosvika padiki padiki huwandu hwemakumi maviri nemakumi mashanu mapoinzi.
22. Ongororo Junki
Survey Junkie ane vangangoita mamirioni gumi vashandisi kupota pasi. Inotarisa pane ongororo chete, sezita zvarinoreva. Inokupa iwe ongororo ine yekupedzisa timer. Paunenge iwe wapedza neizvozvo, iwe unowana mapoinzi. Kana uchisvika kusvika churu, icho chingangoenzana nemadhora gumi, iwo mapoinzi anogona kuregererwa nekutengesa iwo amazon zvipo makadhi.
Survey Junkie inokurumidza uye hairegi vashandisi vayo vamirire kudzikunura kwavo kubhadhara. Iyi zvakare imwe yeakanakisa sarudzo kana iwe uchitsvaga mhinduro dzemabatiro emahara amazon zvipo makadhi.
23. Kugamuchira Hog
Iwe zvakare unosarudza nezve kutenga kwedu? Uye iwe unotenda mukuyedza akasiyana mabrands? Saka, heino mukana wakakwana wekuti iwe uwane kubva kuzvitoro zvako zvaungangodaro wakaita kubva chero kupi kuburikidza nekutambira hogi. Receipt hogi inobvumira vatengi vayo kurodha maresiti avo ekutenga uye kuwana mapoinzi.
Iine dzimwe nzira dzekuwana nadzo. Iwe unogona kugadzira nekuisa iyo yakawanikwa mibairo muzvipenga. Spins inokutendera iwe kuti uwane mamwe mapoinzi. Iwe unogona zvakare kuita ongororo kuti uwane imwe yekuwedzera mari. Mukupedzisira, iwe unogona kudzikunura mari yako nekutengesa iwo amazon zvipo makadhi.
Ichi chinyorwa chakapa ivo vaongorori nzira dzinonyanya kushamisa dzekuwana avo emakadhi emakadhi. Dzese nzira dzinoda zero kudyara. Unogona kudhawunirodha maapplication uye kuvhura mabhurawuza emahara. Nekungoshandura nguva yako yekunakidzwa kuti uwane nguva, iwe unogona kusvika kune emahara amazon zvipo makadhi.
Aya masayiti anosanganisira mabasa akareruka sekuita tsika dzevatengi uye zviitiko zvazvino, mabhaisikopo, uye zvimwe zvinhu zvinonakidza izvo munhu angangoda kubvunzwa nezvazvo sevamwe vanopa kufunga maonero ako pazvinhu zvekushandisa kwako kwezuva nezuva. Dzimwe dzadzo dzinonakidza kwazvo kushandisa sezvavanopa kutamba mitambo, jumbo pack yevanoda mutambo. Ese iwo haangokubatsire iwe kuwana emahara amazon zvipo makadhi asi anotendera yako kutenga kuti ive inonakidza, inonakidza, uye inovaraidza.
Tinotenda kuti ino saiti inofanirwa kubatsira kune vanotenga zvekutengesa. Unogona kuedza kune chero munhu wesaiti yataurwa pamusoro kana App kuti ikubatsire kuwana emahara amazon zvipo makadhi.
Anofara emahara kutenga!
Youtube TV Promo Makodhi 2020
Iko Netflix iri Pasi Izvozvi? Tarisa Urarame Chimiro
Yakanakisa Minecraft Ganda Pfungwa & Matipi (2020)
www tarisa mafirimu online tv
epamusoro emahara emahara eTv ekushambadzira
nzvimbo dzekuona mahara emahara eTv
mawebhusaiti ekuona emahara maTV uye mafirimu
roblox id = 17 gadzirisa